ဒိုးမယ် - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
အိမ်တွင်းအောင်းချိန်မှာ စားသင့်တဲ့ ချက်ရလွယ်ကူသော အစားအစာများ
အခုလတ်တလောမှာဆိုရင် လူတိုင်းနီးပါးဟာ Home Quarantine ဝင်ကာအတတ်နိုင်ဆုံးရောဂါဆိုးကြီးကို ကာကွယ်နေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာနှင့်အဝန်းမှာ ရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့ အတွက် စီးပွားရေးအခြေအနေ တွေကလည်း ကျဆင်းနေတာ နေရာတော်တော်မျာများမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာဆိုရင် လုံးဝကို ချွေတာရေးနဲ့ ကိုက်ညီပြီး အာဟာရလည်းပြည့်စုံမဲ့ အစားအစာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ...
လက်သန့်စင်ဆေးရည်၊ လက်အိတ်၊ mask နဲ့ လက်ဆေးဆပ်ပြာ အစရှိတဲ့ အရာတွေက ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ကာကွယ်ဖို့ အရေးပါတဲ့အရာတွေပါ။ အဝယ်များလာတဲ့အခါမှာစျေးတက်လာပြီး ဝယ်ရတာလည်းရှားပါးလာပါတယ်။တချို့မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကော ဝယ်ရတာရှားပါးတဲ့အတွက်ကော ဘယ်လိုအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်လည်းဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ လက်သန့်စင်ဆေးရည် လက်သန့်စင်ဆေးရည်ကဝယ်ရတာ ခက်နေပါပြီ။ လက်သန့်စင်ဆေးရည်ကို အရက်ပြန်၊ ရှားစောင်းလက်နှင့်ဗိုက်တာမင်အီး...
အတာသင်္ကြန် လည်းရောက်တော့မှာဖြစ်သလို ကမ္ဘာနှင့်တစ်ဝန်းမှာလည်း ကပ်ဘေးကြီးဆိုက်ရောက်နေတာလည်း အကုန်အသိပါပဲ။ အတာသင်္ကြန်ပွဲဆိုတာကလည်းမြန်မာတို့ရဲ့ အထွတ်အထိပ်ထားရာပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူတိုင်းက အပြင်မထွက်ကြရင်တောင် အိမ်တွင်းကနေ ကျင်းပကြမယ်ဆိုတာယုံကြည်နေပါတယ်။ အိမ်တွင်းမှာနေရတဲ့ကာလမှာ ပွဲတော်စာလေးတွေလုပ်စားဖို့အလွယ်ကူဆုံး နဲ့ စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်မဲ့ အစားအသောက်တွေကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ မုန့်လုံးရေပေါ် လွယ်လည်းလွယ်တယ်။ ဆန်မှုန့်...
ကူးစက်ရောဂါကနေ ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ်ခံအားကို စားရင်းသောက်ရင်း မြှင့်တင်ကြစို့
အခုအချိန်မှာ ကမ္ဘာနဲ့တစ်၀န်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသလို ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း သက်သာဖို့မြန်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ‌‌‌‌‌‌‌ကြောင့် အောက်မှာ ဘယ်လို စားရသောက်ရမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ဖတ်ရှူလိုက်ကြပါတော့နော်။...
မြန်မာတို့ရဲ့ ထုံးစံအရ သင်္ကြန်ကာလာ နှစ်ကူးအချိန်မှာ သင်္ကြန်မုန့်မျိုးစုံတွေ လုပ်ပြီး အိမ်နီးချင်းတွေကို လိုက်ဝေရင်း အလှူလုပ်တဲ့ ဓလေ့လေး ရှိပါတယ်။ မုန့်မျိုးစုံထဲကမှ မြန်မာလူမျိုးတွေ အကြိုက်များတဲ့ မုန့်လုပ်နည်းတွေကို ဒိုးမယ်မှ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ မုန့်လုံးရေပေါ် ကောက်ညှင်းမှုန့် ၂ ဆ၊ ဆန်မှုန့်...
ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစဖို႔ ဘာေတြ စားသံုးရမလဲ
ယခုလို ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္(စ္) ေတြ ျဖစ္ေနဆဲ ကာလမွာ က်န္းမာျပီး ကိုယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ေနဖို႔က အလြန္အေရးၾကီးေနပါတယ္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ဘာေတြ စားရမလဲဆိုတာ ဒိုးမယ္ကေန ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပဲ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္စားသံုးေနတဲ႔ အစားအေသာက္ေတြထဲမွာ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစတဲ႔...
ေန႔စဥ္ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ ေသာက္သံုးရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာနိုင္လဲ
ကိုယ္႔အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေကာ္ဖီ မေသာက္ရရင္ မေနနိုင္တဲ႔ သူေတြ ရွိၾကလား? ေကာ္ဖီကေတာ့ အလုပ္ေရာက္ရင္ မေသာက္ဘဲ မေနနိုင္တဲ႔ အရာေလးျဖစ္ေနျပီေနာ္။ ေကာ္ဖီေလး ေသာက္လိုက္မွ အလုပ္ လုပ္လို႔ ေကာင္းျပီး ေနသာထိုင္သာေလး ရွိသြားတယ္။ ေကာ္ဖီ တစ္ေန႔ တစ္ခြက္...
ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ မီးဖိုေခ်ာင္ဟာ သင္တို႔အတြက္ ရတနာသိုက္တစ္ခုဆိုတာ သိၾကရဲ့လား။ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားဟာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသုံးဝင္ေနတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္တင္သာမက ေခၽြတာေရးအတြက္ပါ သိသင့္တာမို႔ ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက ေဆးဝါးအျဖစ္အသုံးျပဳလို႔ရမဲ့ပစၥည္းေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ၁။ဆား ဆားဟာေတာ္ေတာ္ေလးအသုံးဝင္ပါတယ္။ ေျခဖဝါးအသားမာမ်ားကို ဆားေရေႏြးစိမ္လ်င္ ေပ်ာက္ကင္းပါတယ္။...
သၾကၤန္ေရာက္ဖို႔ သိပ္မလိုေတာ့ဘူးေနာ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ႔ ထံုးစံအရ သၾကၤန္ကာလ နွစ္ကူးအခ်ိန္မွာ သၾကၤန္မုန္႔မ်ိဳးစံုေတြ လုပ္ျပီး အိမ္နီးခ်င္းေတြကို လိုက္ေ၀ရင္း အလွဴလုပ္တဲ႔ ဓေလ႔ေလး ရွိပါတယ္။ မုန္႔မိ်ဳးစံုေတြထဲကမွ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ မုန္႔လုပ္နည္းေတြကို ဒိုးမယ္ကေန ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။ မုန္႔လံုးေရေပၚ ေကာက္ညွင္းမႈန္႔ ၂...
ေနြရာသီေရာက္ျပီဆိုရင္ ေနပူၾကီးထဲမွာ အျပင္ကို ခဏခဏ ထြက္ရတဲ႔ သူေတြ အတြက္ေတာ့ အသားမည္းမွာကေတာ့ မလဲြပါပဲေနာ္။ suncream လိမ္းရင္လဲ ေနပူရတဲ႔ထဲ ေခ်ြးေတြနဲ႔ ခ်ဲြပစ္ပစ္ၾကီး ျဖစ္ေနမွာကိုလဲ မၾကိဳက္ဘူးဆိုရင္ ဒီအသီးေတြ စားျပီး sun burn ျဖစ္တာကို ကာကြယ္ၾကမယ္။...
Page 1 of 3812345Next ›Last »